प्रोस्टेट - पुरुष शरीर एउटा सानो ग्रंथि, को थैली र urethra बीच स्थित। पर्याप्त सानो र कार्यहरु सीमित छ (विशेष स्राव को मुख्य रूप उत्पादन गुणस्तर शुक्राणु उत्पादन), यो समस्या धेरै मानिसहरूको एक विशाल संख्या दिन्छ। समस्या जवान मानिसहरू आफूलाई prostatitis रूपमा रोग फेला गर्दा प्रारम्भिक उमेर मा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ (25 वर्ष वा अगाडिको)। यो छ प्रोस्टेट ग्रन्थि, एक सुनिंनु बारम्बार urination, तल्लो पेट मा heaviness, निर्माण, अनिद्रा समस्या र यति मा एक प्रभाव छ। डी विशेषज्ञहरु कि prostatitis हाम्रो दिनमा "rejuvenated", छ भन्छन्। ई यसलाई झन् छ जवान मानिसहरू मा निदान (पहिले यो रोग भन्दा 30-40 वर्ष को बच्चाहरु थियो)।
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्: यौन छाडा (संक्रमण), गरिब स्वच्छता (र संक्रमण), आसीन जीवन शैली (विशिष्ट कार्यालय कर्मचारी, कम्प्युटर अगाडि सञ्चालन आफ्नो अधिकांश समय खर्च) त्यसैले, अनियमित यौन जीवन (वीर्य कुनै जारी) र एन prostatitis व्यवहार गर्नुहोस्। antibacterials प्रोस्टेट मालिश निर्धारित र जीवन शैली परिवर्तन गर्न सिफारिस (थप व्यायाम चिसो लाग्न छैन, र यति मा। डी।)।
सबैभन्दा गम्भीर प्रोस्टेट रोग: क्यान्सर
यदि अनुपचारित prostatitis पुरानो बन्नेछ। - तर पनि अधिक अप्रिय र गम्भीर रोग शरीर को यो भाग विकास गर्न सक्ने प्रोस्टेट adenoma (सौम्य ट्यूमर) र प्रोस्टेट क्यान्सर। प्रोस्टेट क्यान्सर केही देशहरूमा पहिले नै तेस्रो स्थान (फोक्सो र पेट क्यान्सर पछि) पुगेको छ, तर यो मृत्यु मा 2nd ठाउँ लिन्छ (फोक्सो क्यान्सर पछि)। प्रोस्टेट क्यान्सर देखि क्यान्सर संग सबै रूसी मानिसहरू को 10% मर्छन्। यो रोग को लक्षण prostatitis को लक्षण समान हो: बारम्बार urination, मूत्र को कमजोर धारा, निर्माण संग समस्या, को भुँडी मा heaviness। तथापि, मूत्र मा क्यान्सर को चरण देखा रगतको ड्रप, त्यहाँ perineum मा दुखाइ, पुरानो दुर्बलता, हड्डी दुखाइ, कम extremity edema छन्।4चरण रोग जस्तै प्रोस्टेट क्यान्सर रूपमा छन्। क्यान्सर चरण म जीवन - सबै विरामीहरु को 90% को लागि 10 भन्दा बढी वर्ष।5वर्ष रोग संग जीवित विरामीहरु को 100%। तर रोग को यो चरण मा मात्र सफल उपचार को मामला मा रोकियो। उपचार गलत तरिकाले काम तोकिएको छ भने, वा रोगी डाक्टर को सबै आवश्यकताहरु अनुरूप छैन, एक प्रगतिशील प्रोस्टेट क्यान्सर छ। जीवन प्रत्याशा क्यान्सर चरण द्वितीय जान्छ भने रोगी को मात्र विरामीहरु को 60-70% गर्न, 10 भन्दा बढी वर्ष हुनेछ। जो निदान गाह्रो प्राप्त विरामीहरु को बाँकी 30-40%, 10 वर्ष भन्दा कम बाँचिरहेका छौं। अन्य स्रोतबाट अनुसार, विरामीहरु को 100% कम से कम अर्को5वर्ष बाँचिरहेका छौं। फेरि, प्रोस्टेट क्यान्सर विकास गर्न प्रतिकूल उपचार (वा तत्संबंधी अनुपस्थिति मा, रोगी समय मा डाक्टर गर्न सम्बोधन नभएसम्म), वा अन्य कारक (उदाहरण, व्यक्तिगत पनि जीव को विशेषताहरु) मा निर्भर गर्दछ, रोगी जारी गर्दा। 10 र थप वर्ष को जीवन span चरण III प्रोस्टेट क्यान्सर संग विरामीहरु को मात्र 30-40% छ। अन्य स्रोतबाट 50% को5वर्ष अस्तित्व दर को कुरा। यो चरण मा (र पनि पहिले) त्यहाँ metastases (को प्रसार छन् क्यान्सर कक्षहरू शरीर को अन्य भागहरु गर्न)। metastases जब यो लगभग, asymptomatic unnoticed विकास गर्न सक्छौं किनभने प्रोस्टेट क्यान्सर खतरनाक छ। सामान्य मा, ढिलो उपचार, अधिक प्रभावकारी यसलाई हुनेछ सुरु गरिएको छ र ढिलो क्यान्सर विकास हुनेछ।
प्रोस्टेट क्यान्सर: एक चरण4(अन्तिम)
दुर्भाग्यवश, डाक्टर, रोगी र आफ्नो नातेदार सबै प्रयत्न गरे तापनि केही विरामीहरु रोग को चरण चतुर्थ संग निदान छन्। यो रोगी भएको प्रोस्टेट क्यान्सर को, नवीनतम सबैभन्दा खतरनाक र सबैभन्दा गम्भीर चरण हो। यो चरण मा जीवन 10 वर्ष, सबै विरामीहरु को 85-90% भन्दा बढी छैन। निस्सन्देह, सबै, डाक्टर सबै निर्देशनहरू निम्न, आदि तर, आशा हामीलाई चिकित्सा दिन्छ अझै पनि खडा छैन र झन् वाक्यांश सुने द्वारा रोगी को स्थिति मा उपचार मा निर्भर गर्दछ। "। क्यान्सर - एक वाक्य छ", प्रोस्टेट क्यान्सर को सम्बन्ध मा सहित। क्यान्सर बढ्छ यस प्रकारको संग उपचार, र बिरामीको को जीवन को नयाँ तरिका।
प्रोस्टेट क्यान्सर को उपचार हर्मोन उपचार, उपचारात्मक चिकित्सा, सर्जरी र केमोथेरापी समावेश (मेटास्टेसिस को प्रारम्भिक चरणमा)। आज पनि cryotherapy (चिसो द्वारा घाउ को उपचार) प्रयोग भएको छ। को Altai क्षेत्रीय oncologic 200 विरामीहरु (मानिसहरूको औसत उमेर) को उपचार मा 2009. डाटा मा Dispensary मा प्रोस्टेट क्यान्सर संग जाँच गरियो। अध्ययन निष्कर्ष क्यान्सर सर्जरी को अनुवादित पक्षबाट जीवन वृद्धि गरेका थिए। मा चरण III-चतुर्थ जीवन span वृद्धि लागि थप प्रभावकारी रेडियोथेरेपी संग संयोजन मा हर्मोन उपचार को प्रयोग भएको थियो।
फेफडों, लक्षण को क्यान्सर को उपचार
के जेन फ्रिसकेसँग मस्तिष्क क्यान्सर छ? ग्लोब्लास्टोमा के हो र जेन फ्रिसकेको बारेमा चिकित्सकको भविष्यवाणी के हो?
मानिसहरू मा मूत्राशय क्यान्सर। लक्षण र मानिसहरू मा मूत्राशय क्यान्सर को उपचार
कसरी hairdresser रूपमा आफ्नो bangs धेरै राम्रो कटौती गर्न?
फोटो मार लागि विषयवस्तुहरू। यस बालिका लागि फोटो शूट को विषयवस्तु। घर मा फोटो शूट लागि विषय
जर्ज लुइस Pila: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन
पर्ल, Shira (ताल) को गाउँमा: इतिहास र विवरण